Hiran State - News: HS:-Kulamadii baarlamaanka Soomaaliya oo joogta u socda iyo
HS:-Kulamadii baarlamaanka Soomaaliya oo joogta u socda iyo
HS:-Tan iyo markii xilka laga qaaday gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Shariif Hasan waxaa mudanayaasha iyo qaabka uu u shaqeeyo baarlamaanka laga dareemayaa isbedel aad u weyn.
Isbedeladan ayaa yimid kadib markii ay mudanaashu u doorteen gudoomiye Madoobe Nuunoow Moh'ed iyadoo la joogteeyey kulamadii iyo fadhiyadii ay iskugu imaan jireen mudanayaashu. sidoo kale waxaa si tar tiib tartiib ah u soo noqday awoodii baarlamaanka maadama ay ku hadlaan mudanayashu codka shacabka.
Beesha caalamka oo horey u arki jirtay gudoomiye ka soo qeyb galaya shirarka ay fadhiyaan madaxweynaha iyo r/wasaaraha waxkastana wax ka saxiixi jiray kadibna dhihi jiray anigaa markaan Mogdisho tago waxaan la saxiixo iney meel mar noqdaan ka soo dhameynayo mudanayaasha, hada arintaas waxey u muuqataa iney meesha ka baxday.
Dhacdadii ugu danbeysay ayaa maalintii shaleyto aheyd ka dhacday magaalada Mogdisho kadib markii xili uu doonayey in uu la kulmo amaba hor fadhiisto mudanayaasha baarlamanka wakiilka midowka Africa u qaabilsan arimaha Soomaaliya horeyna dalka Chana uga soo noqday madaxweyne ayaa ka baaqsaday shirkaasi kadib markii madaxweyne Shariif ka codsaday inuusan la kulmin maadama ay goobta ay ku kulmayeen mudanayaashu ay xaadir ku ahaayeen ku dhawaad 325 mudane taasi oo hadii uu booqan lahaa ay adkaan laheyn inba la dhageysto labada Shariif hadalkooda.
Waxaa iyadana laga walwal qabaa hadii ay kulamada baarlamanka iska socdaan ilaa iyo markal a gaaro shirka London amaba midka la iclaamiyey inuu ka dhaco Garoowe oo ay mudanayaashu waxaas oo dhan dhegaha ka fureystaan iyaguna waxkasta oo dibada lagu soo dhoodhoobo halkooda ku sugaan.
Mudanayaasha baarlamanka oo xiligii uu hogaaminayey gudoomiyahii hore Shariif Hasan dalka Soomaaliya looga yaqiinay xildhibaanadaii ugu shaxaadka badnaa codkoodana ku bedesha mararka qaarkood wax ka yar 100 dolar ayaa hada u muuqda kuwo laga dareemayo isbedel dhinaca shaqada iyo isku duubnaan qalqal galisay beesha caalamka oo gudoomiyahii hore sidey doonaan ka yeeli jiray ilaa mudanayasha loogu hanjabo iney meel mariyan heshiiskii Kampala Acord ama la kala diri doono.
Su'aalaha ay hada bilaabeen iney mudanayashu isweydiiyaan waxaa ka mid ah.
1- Yaa awood u leh iney kala diraan baarlamaanka Soomaliya?
2- Yaa awood u leh in baarlamanka hada jira iyadoon la helin baarlamaan ku yimaada doorasho oo isaga bedela cida awood u leh iney tiraahdo waxa laga dhigaya tirada 225.
3- Yaa dalka iska leh sidiisaba ma IGAD, African Union, Mahiga, Rolleyn, dowladaha Yurub mise talada waxey ka godaa Soomaalida.
4- Maxuu gudoomiyahii hore ee shaqada laga ceyriyey kaka duwan yahay masuuliyiintii kale ee xilkooda ku waayey qalalaasahii uu intooda badan sababta u ahaa Shariif Hasan?
5-Mudanayashan iyo gudoomiyaha cusuba maxaa ka galay shirarkii hore iyo kuwa soo socda maadama ay kulamadooda joogto u wataan waxey u muuqataa in waxkasta oo dibada lagu soo dhoodoobo iyaga la horkeeni doono madama sida laga wada dheregsan yahay gudoomiyahii hore Shariif Hasan ay xaaladiisa ku soo aruurtay in xil wasiir nimo looga raadiyo xukumada C/wali Gaas.
Sikastaba dowlada Ingiriiska waxaa miiska u saaran hadii xal loo waayo qilaafka baarlamaanka iney toos ula xaajooneyso gudoomiyaha cusub maadama uu isagu shir gudoomiyo kulamada hada socda gudoomiyahii horena awoodi waayey inuu hor tago mudanayaasha awooda uu hada isku haleynayana ay tahay oo kaliya Mahiga oo ka baqaya in Shariif Hasan ka shifo sir badan taasi bedelkeena u wata shirkasta oo ka dhacaya dibadaha.
Ugu danbeyn waxey u muuqataa hadii mudanayaasha ay sida ay hada yahiin iskugu duubnaadaan iney iyaga soo dooran doonaan madaxweyne iyo gudoomiye baarlaman meeshana sii joogi doonaan ilaa laga helo baarlaman ku yimaada doorasho oo isaga bedela sida ku qoran dastuurkii 2004kii lagu soo dhoodhoobay Kenya.
· admin on February 09 2012 11:20:20 · 0 Comments · 1857 Reads ·
14,600,499 unique visits